Guddoomiyaha gobolka Banaadir oo dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ayaa balan qaaday in lasii xoojin doono horumarinta bilicda Caasimadda+(SAWIRRO). | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Guddoomiyaha gobolka Banaadir oo dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ayaa balan...
Guddoomiyaha gobolka Banaadir oo dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ayaa balan qaaday in lasii xoojin doono horumarinta bilicda Caasimadda+(SAWIRRO).
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magalada Muqdisho Madane Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Filish) oo Maanta dalka dib ugu soo laabtay ayaa bogaadiyey shaqadii la qabtay intii uu Dalka ka maqnaa, waxaa uuna u mahad celiyey Ra’iisul Wasaraha Soomaaliya Madane Maxamed Xuseen Rooble iyo ku xigeenada Maamulka Gobolka Banaadir oo shaqo fiican qabtay.
Guddoomiye Cumar Filish waxaa garoonka Aadan Cadde ku soo dhoweeyey xubno isugu jira ku xigeenadiisa, Wasiiro, Xildhibaano ka tirsan labada Gole, Guddoomiyasha Degmooyinka, Agaasimayasha Maamulka Gobolka Banaadir, Saraakiil ka tirsan Ciidamada Qalabka sida iyo Qeybaha Bulshada.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Filish) ayaa ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed ee Caasimadda in ay maamulka gobolka Banaadir ku gacansiiyaan waxkaqabashada saameenta Roobka u geesto bilicda Magaalada isagoo balan qaaday in lasii xoojin doono horumarinta bilicda Caasimadda.
Previous articleJoe Biden oo la saadaalinayo in uu qaadayo Xayiraadaha dhinaca socdaalka ah ee saran dalal Muslim ah.
Next articleWasiir Qorshaynta X.F.S “ waa in aan dar dargalinnaa Fulinta waajibaadka naloo igmaday”+(SAWIRRO).